पाथिभरा माताले सबैको कल्याण गरुन, चैत्र २६ गते बिहिबार,तपाईको राशिफल यस्तो छ !:: Mero Desh
पाथिभरा माताले सबैको कल्याण गरुन, चैत्र २६ गते बिहिबार,तपाईको राशिफल यस्तो छ !
Published on: २५ चैत्र २०७७, बुधबार १८:५२
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) नयाँ कार्यको थालनि गर्न राम्रो समय रहेको छ ।साजेदारी कार्यमा बिशेष सजग रहनु होला । आफुभन्दा सानाको सहयोगमा म’नग्य लाभ प्राप्त हुनेछबोलिको प्रभाव बढ्नाले ईष्ट मित्रको साथ मिल्नेछ अध्यन अध्यापनमा समय उत्तम रहेकोछ । कला कौशलका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहने छ । आम्दानि उत्तम रहला
बृष राशि (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) सम्पादित कार्य हरुका क्षेत्रमा सामान्य झन्झट आई पर्नेछ । मान्यजन तथा पारिवारीक साथसहयोगमा केहि दुरताको सामना गर्नु पर्ला । भौतिक साधनको प्रयोगमा बिशेष ध्यान दिनु राम्रो रहने छ । बिद्या तथा बौधिक क्षेत्रमा भने राम्रो समय रहेको छ । सबारी साधनको प्रयोगमा बिशेष साबधानि अपनाउनु पर्ने छ ।
मीथुन राशि (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) कामकाज को क्षेत्रमा भने बि’शेष सजग रहनु होला अपजसआईपर्ने योग रहेको छ नसोचेका क्षेत्रमा सामान्य खर्च हुनाले मनमा खिन्नता पैदा हुनेछ । आटँ र शाहसमा बृद्धि भएता पनि साथिभाई हरु टाडिएको अनुभव हुन सक्ला । मान्यजनहरु को साथ सहयोगमा गरीएका कार्यहरु उत्तम रहनेछनयात्रा मा साबधानि अपनाउनु होला ।
कर्कट राशि (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो) बोलिको गलत अर्थ लाग्न सक्ला तसर्थ वाणीमा ध्यान दिनुहोला । संचित रकम खर्च हुन सक्नेछ । खानपानमा बिशेष ध्यान दिनुहोला । सामान्य चोट पटक वा स्वास्थ सम्बन्धी समस्या को सामना गनुपर्नछ । नजिकका मित्रजनहरुको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ अरुको बिश्वासमा नप र्नुनै उत्तम रहनेछ ।
सिंह राशि (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे) ब्यापार ब्यव सायमा सामान्य समस्या देखा पर्न सक्नेछ खुट्टा तान्नेब्यक्ति हरुको बृद्धि हुनाले कार्यसम्पादनमा बिशेष होसियार हुनु पर्ने छ । निर्णय गर्ने क्षमतामा कमि आउने छ । खानपानमा रुचि जाग्नेछ । अधुराकार्य सम्पादनका निम्ती समय उत्तम रहनेछ । शारीरिक आलस्यताका कारण कार्यक्षेत्रमा अपज सको सम्भाबना रहनेछ ।
कन्या राशि (टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो) खुट्टा बतान्ने ब्यक्तिहरु बाट बच्नु पर्ने समय रहेको छ । सामान्य कार्यको निम्ति धेरै समय र परीश्रम खर्चनु पनेछ । मनमा सामान्य चिन्ताले बास गर्नेछ परीवारका सदस्यहरु बाट टाढाभएको महसुस हुनेछ । तात्कालिन आर्थीक अभाबको सामना गर्नु पर्नेछ नजीकका ब्यत्तित्वहरुबाट धोका हुनाले कार्य सम्पा दनमा सामान्य झन्झट उत्पन्न हुन सक्नेछ ।
तुला राशि (र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते) तपाईको कार्य कुशलताले अरु ब्यक्तिलाई मोहित बनाउन सक्छ । पठन पाठनको क्षेत्रमा समय मध्यम रहेको छ आम्दानिका स्रोत हरु फेला पर्नाले मनमा उत्साहा छाउनेछ ! अरुको भर पर्ना ले सामान्य झन्झट ब्यर्होनु पर्ला मान्यजनहरुको साथ सह योगमा अधुराकार्य हरु सम्पादित रहनेछन । कला कौशल का क्षेत्रमा खर्चिएको समय उत्तम रहनेछ ।
बृश्चिक राशि (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु) सबारी सा धनको प्रयोगमा बि’शेष ध्यान दिनु होला । सभासम्मेलनमा सहभागि हुन सक्ने योग रहेको छ । मानसम्मान प्राप्तिको सम्भाबना रहेको छ ब्यापार ब्यवसायमा समय राम्रो रहेको छ ! आम्दानि मध्यम रहला सामाजिक कार्यमा जुट्ने समय रहेकोछ । मानसम्मान प्राप्तीको योग रहेकोछ!सवारि साध नको प्रयोमा ध्यान पूर्याउनु होला ।
धनु राशि (ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे) आटँ शाहस मा बृद्यि हुनाले तपाईका बिपक्क्षीहरु कमजोर रहनेछन । सामान्य यात्रा हुनसक्ला मित्र तथा दाजु भाई बिचको सम्ब न्धमा सुधार आउनेछ । श्रम र परीश्रमको राम्रो कदर हुने योग रहेको छ मनोरञ्जन मुलक यात्राको सम्भाबना रहेको छ । माल सामान हराउन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ । अपरी चित ब्यत्तिहरुको बिश्वासमा नपरेकै बेश रहनेछ ।
मकर राशि (भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि) खान पानको क्षेत्रमा बिशेष ध्यान दिनु होला ! आजको लगानि भोलिका निम्ति फाईदा जनक हुनेछ स्वास्थ सम्बन्धी समा स्याले सताउन सक्छ अरुको भर पर्दा का’र्यक्षेत्रमा सामान्य अप्जस आउनसक्छ मान्यजनहरु सगँको सम्बन्धमा सा मान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । सामान्य बादबिवादको झमेलामा फसिने सम्भाबना रहेकोछ ।
कुम्भ राशि (गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द) मानसिक चन्चलताले गर्दा कार्य दिगो नरहन सक्छ पारीबारिक झोर झमेलाले सताउन सक्छ । तपाईको कार्यको फाईदा अरुले सहजै लिन सक्नेछन । तपाईको सरल मिजासले मित्रजन हरु आकर्शित हुने योग रहेको छ ! दाम्पत्य सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । ब्यापार ब्यवसायका निम्ती उत्तम समय रहेकोछ ।
मिन राशि (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि) अरुको बिश्वा स गर्नाले धोका हुन सक्छ । खुट्टा तान्ने ब्यक्तिहरु बाट बच्नु पर्ने समय रहेको छ । सामान्य आर्थिक अभाब झेल्नु पर्ला पारीबारिक झोर झमेलाले सताउन सक्छ!स्वास्थमा सामा न्य समस्या आउन सक्छ । खानपानको गडबढिका का’रण सामान्य खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । कार्य क्षेत्रमा अरुको दबाबको महसुस हुनेछ ।